FIFA World Cup Qatar: gumi emahotera matsva anonakidza
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Qatar Kuputsa Nhau » FIFA World Cup Qatar: gumi emahotera matsva anonakidza
Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Sports
Nhasi tinocherekedza gore rimwe chete tichiverengera kuenda kuFIFA World Cup Qatar 2022. Qatar Tourism inoratidza gumi mahotera matsva uye zvinokwezva zvichavhurwa mutambo usati watanga.
Ko COVID ichabvisa here kunakidzwa kubva muFIFA World Cup iri kuuya?
Qatar Tourism inoenda kumberi kuzere nemahotera anopfuura zana uye dzimba dzakagadzirira kugamuchira vaoni nevatambi.
Kuti isangane nezvinodiwa Qatar iri kutsvaga kushandisa zvese zviripo pekugara sarudzo. Sarudzo nyowani dzevateveri muna 2022 dzinosanganisira kudzika musasa mugwenga uye kugara muchikepe chenguva pfupi rwendo rwechikepe chine maonero anoshamisa eDoha's cityscape skyline.
Qatar ichave nemakamuri anosvika zana nemakumi matatu ezviuru aripo evateveri miriyoni imwe chete vanotarisirwa mukati memutambo wemazuva makumi maviri nemasere.
Qatar inogadzirira kugamuchira vateveri vanopfuura miriyoni panguva yese yemutambo.
Chief Operating Officer weQatar Tourism, Berthold Trenkel, akati: “Vatsigiri venhabvu vachange vaine nzvimbo dzakasiyana siyana dzekugara dzekusarudza kubva. Tinoda kuti vafambi vawane zvakanakisa zvekugamuchira vaenzi veQatari neMiddle East uye vave nechiitiko chisingakanganwike chinozoita kuti vade kudzoka. Pamwe nekuona nhabvu, tinokurudzira vateveri vese kuti vaongorore zvakasiyana-siyana zveQatar, kubva pakuenzanisa chikafu chemuno kusvika pakuongorora mamuseum edu emhando yepamusoro, kubva pakunakidza dune kugeza kusvika pakuzororera muspa kana kumahombekombe, pane chimwe chinhu chemunhu wese.
10 emahotera matsva anonakidza uye zvinokwezva anosanganisira:
zita nzvimbo About
1 Qetaifan Island North Pedyo neLusail City Yakabhadharwa seyekutanga "Entertainment Island" muQatar, iyo budiriro ichasanganisira yakasarudzika nzvimbo yekutandarira, state-of-the-art yemvura paki, kirabhu yemahombekombe, zvitoro, uye zvakasanganiswa-kushandisa shongwe. Chitsuwa ichi chichange chiri pedyo neLusail Stadium uko kuchaitika mafainari eFIFA World Cup 2022™.
2 Katara Towers Lusail Marina District Kutambira hotera yenyeredzi shanu, shongwe dzemuLusail ishanduro yekuvaka yeQatar's chisimbiso chenyika, chinomiririra mapanga echinyakare. Chivako ichi chichaburitsawo maFairmont neRaffles mhando muQatar.
3 Nzvimbo Vendome lusail Nzvimbo yeVendome yakagadzirirwa kuvhurwa muguta reLusail muQatar uye ichaunza pamwechete zvitoro, nhandaro uye varaidzo. Iyo budiriro ichava nehotera mbiri-nyeredzi shanu (Le Royal Méridien nePalais Vendôme, Luxury Collection Hotel), dzimba dzinoshandirwa (Le Royal Méridien Residences), dzinosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu ezvitoro zvakasiyana, uye nzvimbo yakanaka yakavhurika yakakomberedzwa nemakofi nemarestaurant.
4 Rosewood Central Doha Iri mushongwe mbiri dzinoshamisa dzakafemerwa neQatar's coral reef, Rosewood Doha neRosewood Residence Doha ichave nehotera yepamusoro, spa, uye nzvimbo-ye-the-art yekusimbisa muviri.
5 Aljaber Twin Towers Lusail Marina District Imwe yeAljaber Twin Towers ichava hotera ine nhurikidzwa makumi maviri nembiri muDunhu reMarina, ichipa dzimba, dzimba dzehumambo uye dziva rekushambira pamusoro pedenga remba neresitorendi yakatarisana neArab Gulf.
6 Pullman Doha West Bay Yakanakisa inogara mudunhu reDoha rine mukurumbira, iyo nyeredzi shanu Pullman Doha West Bay hotera ichaiswa mushongwe inoshamisa yakakwira-yemazuva ano.
7 Dream Doha Doha Yakagadzirirwa kuva Dream Hotel Group's flagship property muGulf, iyo inoshamisa 266-room property ichange iine nzvimbo sere dzakasiyana dzekudyira uye dzehusiku, 35 dzimba dzekugara, pamwe nenzvimbo yakasvibira yedziva; zvese zvichibatanidza kugadzira chikamu-chinotsanangura chiitiko chekugamuchira vaeni.
8 The St. Regis Marsa Arabia Island Iyo Pearl-Qatar Kupemberera nhaka yakapfuma yetsika dzekumabvazuva, The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar, ichapa yakasarudzika oasis ine yakasarudzika yakamira-yega nzvimbo inoimisa kubva kune chero budiriro muQatar.
9 ME Doha Doha Iyo hotera ichazvirumbidza 235 makiyi emakamuri, zvivakwa zveMICE, dziva risingaperi uye dzakasiyana siyana dzekudyira.
10 West Walk Al Waab Iyo yakasarudzika-yakasanganiswa-yekushandisa kusimudzira mukati memoyo weDoha inonyanya kufarirwa nharaunda, ine-nyeredzi ina hotera, sinema, uye hypermarket, ine akawanda macafe uye zvitoro.
Qatar inogara yakaverengerwa neNumbeo senyika yakachengeteka pasi rose kune hutsotsi uye kuchengetedzeka kwakawanda. Avhareji tembiricha muQatar muna Mbudzi naZvita ndeye 18-24 ° C - yakakwana kune vateveri nevatambi.